Home Wararka Dagaal ka qarxay Dhuusomareeb
[DEG DEG] Dagaal ka qarxay Dhuusomareeb
Wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa sheegay in uu goordhoweyd ka qarxay dagaal u dhaxeeya ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda.
Ciidamo ka tirsan kuwa Gorgor iyo Ciidanka Booliska ee ilaaliya xarunta degmada iyo baraha koontarool ee ku dhaw ayaa dagaal culus uu dhexmaray, kadib markii ay ciidamada Gorgor ay ka horyimaadeen howl-galo ay wadeen ciidamada booliska, oo ka dhan ahaa maandooriyaha.
Wararka ayaa intaas kusii daraya in ciidamada dagaalka u dhaxeeyay in uu jiro khasaare dhaawac oo labada dhinac ah, ayada oo askarta dhaawacooda la gaarsiiyay isbitaalka Dhuusamareeb.
Dagaalka ayaa saameeyay isku socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada Dhuusamareeb, iyada oo Bulshada qeybaheeda kala duwan ay walaac ka muujiyeen dagaalkan oo u dhaxeeya ciidamada dowladda.
Illaa hadda majiro wax war ah oo kasoo baxay laamaha maanka iyo maamulka Dhuusamareeb oo ku aadan dagaalka maanta dhex-maray ciidamo ka wada tirsan dowladda.
Previous article[AKHRISO AJANDAHA] Beesha caalamka oo ku biirtay shirka golaha wadatashiga
Next article[Akhriso] Midowga Musharaxiinta oo Qoraal xasaasi ah u gudbiyay shira Golaha Wadatashiga
Go’aanka Maxkamadda ee Kenya & Somalia waa qasab in uu hirgalaa...
MW Farmaajo oo katacsiyeeyay geeridii Suldaan Axmed Jaamac